July 2020 – The Word
အိမျမရှိသူမြား အိမျပိုငျလာစမေယျ့ သိကွားမငျးကိုယျတိုငျဖနျဆငျးပေးရတဲ့အထိအစှမျးထကျဂါထာတျောကွီးကိုမြှဝလေိုကျပါတယျနျော.. အိမျမရှိလြှငျဇိမျမရှိနိုငျပါ….ကိုယျပိုငျအိမျ အရိပျမရှိကွသေးသူမြားအတှကျရညျရှယျပွီးတငျပေးခွငျးဖွဈပါတယျ… နံနကျစောစောထပါ….ပငျြးရိခွငျး မောဟကိုပယျပါ။သရဏဂုံ၃ပါးဆောကျတညျငါးပါးသီလခံယူပါ… အဓိဋ်ဌာနျဝငျပါ…ဖွဈနိုငျရငျကနြျောအခုတငျပေးထားသညျ့အိမျတျောရာစတေီပုံတျောကိုဝယျကွပါ။ မနျးတလေးအိမျတျောရာစတေီရနျကုနျအိမျတျောရာ စတေီ ကွိုကျရာ စတေီပုံတျောကိုဝယျယူထားပါ။ အိမျပွငျဆောကျရနျအတှကျ အခကျအခဲဖွဈနကွေသူမြား အိမျဆောကျလကျစဆကျမဆောကျနိုငျကွသူမြား အဓိဋ်ဌာနျဝငျကွညျ့ ကိုယျတိုငျသိရပါလိမျ့မယျ… လူတိုငျးကိုယျပိုငျအိမျနဲ့ နခေငျြကွစမွဲပါ မကွာခငျ သူရဇ်ဇမဂ်ဂဇငျးမှာ အကယျြ ပါလာပါလိမျ့မယျ။ စာမူတှေ ရောကျသှားပါပွီ။မိမိသညျအဓိဋ်ဌာနျဆောကျတညျပါ…ပုတီး ၂ပတျ အနညျးဆုံးစိပျပါ…၉ပတျစိပျလြှငျပိုကောငျးပါသညျ။ သစ်စာပွု
ပင်လယ်ခရီးလေပြင်းကျလျှင်၊ အမှုအခင်းဖြစ်လျှင်၊သူခိုးဓားပြရန်ကင်းလိုလျှင်၊ လာဘ် လာဘလိုလျှင် ရွတ်ရမည့်ဂါထာ
ပငျလယျခရီးလပွေငျးကလြှငျ၊ အမှုဖွဈလြှငျ၊မငျးစိုးရာဇာ အမကျြရှိလြှငျ၊သူခိုးဓားပွရနျကငျးလိုလြှငျ၊လာဘျ လာဘလိုလြှငျ ရှတျရမညျ့ဂါထာတျော နော ကိုးတနျ ဂါထာတျော နာရဇ်စုတိ ရဇ်စုမာနော နနော နနော ဥတ်တမော မာနော နနော နနော ဘုမ်မိရာဇာနော နနော ဣတိသော ဣတိပိသောဘဂဝါ ဝုတ်တော ဣတိ မန်တသုခါဝဟာ ဣတိ ဗုဒ်ဓဟေိ သရဏံ သဗ်ဗဒေဝေါ ပီယံမမ
စာဖြေဆုရတဲ့ ငွေလေးနဲ့ မယ်တော်ကြီးကို နားကပ်ဝယ်ဆင်ပေးတဲ့ ဦးဇင်းလေး(ဒီလိုပို့မျိုးကိုမှ မရှယ်ရင် ဘယ်လိုပို့မျိုးကို ရှယ်မှာလဲ မိတ်ဆွေ)
[Zawgyi] စာဖြေဆုရတဲ့ ငွေလေးနဲ့ မယ်တော်ကြီးကို နားကပ်ဝယ်ဆင်ပေးတဲ့ ဦးဇင်းလေး(ဒီလိုပို့မျိုးကိုမှ မရှယ်ရင် ဘယ်လိုပို့မျိုးကို ရှယ်မှာလဲ မိတ်ဆွေ) ဒီလိုပို့မျိုးကိုမှ မရှယ်ရင် ဘယ်လိုပို့မျိုးကို ရှယ်မှာလဲ မိတ်ဆွေ…. စာဖြေဆုရတဲ့ ငွေလေးနဲ့ မယ်တော်ကြီးကို နားကပ်ဝယ်ဆင်ပေးတဲ့ ဦးဇင်းလေး.. ဘယ်ပန်းချီရေးလို့ မမှီပါပဲ… တကယ့်ကို စိတ်ကြည်နူးစရာလေးပါပဲ..။ ဘယ်ပန်းချီရေးလို့ မမှီနိုင်တဲ့ ပုံလေးတွေပါပဲ..။ မြင်သူတိုင်းရဲ့
ဝိုး ဝိုး ဝိုး NLD ကို မဲပေးရတာ တန်တဲ့ နောက်ထပ် ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်း
[Zawgyi] ဝိုး ဝိုး ဝိုး NLD ကို မဲပေးရတာ တန်တဲ့ နောက်ထပ် ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်း ​မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်ဖို့ရန် ပြင်ဆင်နေ ပထမဆုံး ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တုကို မြန်မာနိုင်ငံက လွှတ်တင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ channel news asia သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီလို ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်တာက မြန်မာလို စီးပွားရေး
ဖြူဖြူထွေး မှ သူ့ ပုံတူကို ရင်ဘက်ပေါ်တက်တူးထိုးအားပေးတဲ့ ပရိသတ်အတွက် ဖုန်းနဲ့ ငွေကျပ်၂သိန်း လှူဒါန်း
[Zawgyi] ဖြူဖြူထွေး မှ သူ့ ပုံတူကို ရင်ဘက်ပေါ်တက်တူးထိုးအားပေးတဲ့ ပရိသတ်အတွက် ဖုန်းနဲ့ ငွေကျပ်၂သိန်း လှူဒါန်း ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ပုံတူကို ဘယ်ဘက်ရင်ဘက်ပေါ်မှာ တက်တူးထိုးပြီး အားပေးတဲ့ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်က ကိုဇော်လွင်ဦးကို သရုပ်ဆောင် ဖြူဖြူထွေးမှ ဖုန်းအ​​ပြင် ငွေကျပ်၂သိန်းနဲ့ ဆန်၊ဆီ စတဲ့ စားနပ်ရိက္ခာများကို လှူဒါန်းပြီး Surprise လုပ်ခဲ့ပါတယ်။…….. #Zmedi#Entertainment
ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိတဲ့လူတွေက နောက်ကနေလိုက်ခံနေရတယ်… အသက်အန္တရာယ်တောင်စိုးရိမ်မိပါတယ် ဆိုတဲ့ သင်းသင်း(ရုပ်သံ)
[Zawgyi] ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းမသိတဲ့လူတွေက နောက်ကနေလိုက်ခံနေရတယ်… အသက်အန္တရာယ်တောင်စိုးရိမ်မိပါတယ် ဆိုတဲ့ သင်းသင်း(ရုပ်သံ) လူတိုင်းမှာအတိတ်ဆိုတာရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဖော်ပြလို့မရတဲ့အတိတ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ စိတ်မကောင်းတာတစ်ခုက ကိုယ်ဘာတစ်ခုမှယူမထားဘဲနဲ့ သိန်း ၃၀ ယူပါတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကိုကြားကြားချင်းမှာ ကိုယ်ကိုယ့်ကိုသတ်သေချင်စိတ်တွေပေါက်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် မိဘတွေ၊ အပေါင်းအသင်းတွေက ဝိုင်းပြီးဖြေရှင်းခိုင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းတောင်မသိတဲ့ အကောင့်အတုတွေဆိုတော့ မဖြေရှင်းတော့၊ ကြာတော့ ကိုယ့်အသက်အန္တရာယ်တောင်စိုးရိမ်လာရတယ်ဆိုတဲ့ သင်းသင်း crd
လူငယ်တွေအတွက် အရမ်းကောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ….
[Zawgyi] လူငယ်တွေအတွက် အရမ်းကောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ…. မိဘဆိုတာ သားသမီးတွေရဲ့ ကျေးဇူးရှင်တွေပါ။ မိဘဆိုတာ ဘုရားနဲ့ တဂိုဏ်းတည်းထားရမယ့် ကျေးဇူးရှင်တွေပါ။မိဘကို စော်ကားတဲ့လူဟာ ဘယ်တော့မှ ကြီးပွားချမ်းသာမှု မရရှိနိုင်ဘူးဆိုတာ အားလုံးဘဲ သိရှိကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ရှိတုန်းပေး…ရှိတုန်းကျွေး ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း မသေခင် မိမိရဲ့ မိဘဆွေမျိုးများကို အစအစအရာရာ ဂရုစိုက်ပြီး လိုလေသေးမရှိအောင် ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။ဒီvideoလေးဟာ ပညာပေးသက်သက်
“အဆစ်အမြစ်ကိုက်၊ ပန်းနာ၊ အဆုတ်ရောင်၊ နှလုံး နှင့် အိပ်မပျော်ဖြစ်တတ်သူများ အတွက် နွားနို့ ကြက်သွန်ဖြူ”
[Zawgyi] “အဆစ်အမြစ်ကိုက်၊ ပန်းနာ၊ အဆုတ်ရောင်၊ နှလုံး နှင့် အိပ်မပျော်ဖြစ်တတ်သူများ အတွက် နွားနို့ ကြက်သွန်ဖြူ” ကြက်သွန်ဖြူ နွားနို့ ကြက်သွန်ဖြူ နွားနို့ ဟာ စသောက်ချိန်မှာ တမျိုး ကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ ဒါကို သောက်ခြင်းအားဖြင့် 1) ပန်းနာရင်ကြပ် 2) အဆစ်အမြစ် ကိုက်ခဲ ခြင်း 3)
ဖြူဖြူထွေးရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး သူမရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို မျှဝေခဲ့တဲ့ တင်မိုးလွင်
[Zawgyi] ဖြူဖြူထွေးရဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး သူမရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို မျှဝေခဲ့တဲ့ တင်မိုးလွင် တင်မိုးလွင်ကတော့ ဟိုးအရင်အချိန်ကတည်းကနေ အခုချိန်ထိ စမတ်ကျတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့အပြင် ထက်မြက်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းစံထားသင့်တဲ့မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာလည်း မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအတွက် စမတ်ကျကျနေတတ်စေဖို့နဲ့ အတွေးအခေါ်ကောင်းတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ်မျှဝေပေးနေသူပါ။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ လတ်တလော ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်ဖြစ်လာတဲ့ ဖြူဖြူထွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရင်ထဲမှာ အားရကျေနပ်မိတဲ့အကြောင်းကို မျှဝေလာပါတယ်။ ”
ဘဝအောင်မြင်ရေး နည်းလမ်း ၅၀ သင့်ဘဝအတွက် အသုံးဝင်တဲ့အချက်၊ ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ စာ၊ ပါခဲ့ရင်
[Zawgyi] ဘဝအောင်မြင်ရေး နည်းလမ်း ၅၀ သင့်ဘဝအတွက် အသုံးဝင်တဲ့အချက်၊ ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ စာ၊ ပါခဲ့ရင် ၁။ ရဲရဲ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါ။ ၂။ လူကိုကြည့်ရင် မျက်လုံးကိုကြည့်ပါ။ ၃။ ရေချိုးစဉ် သီချင်းဆိုပါ။ ၄။ စတီရီယိုစက် ကောင်းကောင်းတစ်လုံး ပိုင်နိုင်အောင်လုပ်ပါ။ ၅။ ရန်မဖြစ်မနေ ဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကဦးအောင် အပြင်းဆုံး ထိုးနှက်ပါ။
© 2020 The Word.